पहिलोपटक निर्मला पन्त हत्याकाण्ड बारे लिक भयो दिल्लीराजका बाबुछोराले गरेको अडियो, भित्रि कुरा त यस्तो पो रहेछ (अडियो सहित) – Etajakhabar
शुक्रबार, चैत्र ०८, २०७५ | Friday, Mar 22, 2019
पहिलोपटक निर्मला पन्त हत्याकाण्ड बारे लिक भयो दिल्लीराजका बाबुछोराले गरेको अडियो, भित्रि कुरा त यस्तो पो रहेछ (अडियो सहित)
तेह्र वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्याबारे प्रहरीले अझै वास्तविकता बाहिर ल्याउन सकेको छैन । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी भीमदत्त नगरपालिका–२ खोल्टीकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको शवको पोष्टमार्टम पनि जालसाझीपूर्ण हुन सक्ने शंका गरिएको छ ।
निर्मलाको हत्याको मूल कारण मेरुदण्डको माथिल्लो भाग टुट्दा भएको प्रमाण प्राप्त भएको छ । निर्मलाका हात र अन्य अंग कस्सिएका छन् । शरीरका अंग खुम्चिएका छन् । तिनलाई मोड्न सकिने देखिन्न । प्रहरीका अनुसार निर्मलाको टाउको एकदमै लुलो छ ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले पनि हेरेको हुनुपर्छ । निर्मलाको टाउको फनफनी घुम्ने दृश्यतर्फ अहिलेसम्म कसैले ध्यान दिएको छैन । निर्मलाको टाउको फनफनी घुम्नु आश्चर्यजनक हो किनभने निर्मलाको हत्या घाँटी थिचेर भएको भनिएको छ ।
सेवानिवृत्त प्रोफेसर तथा धनगढीमा बसेर सेवा प्रदान गरिरहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका वरिष्ठ चिकित्सक डा। सुभेषराज कायस्थका अनुसार भोकल कर्ड भाँचिएर मृत्यु भएको अवस्थामा घाँटी पनि कक्रक्क हुन्छ । स्पाइनल कर्डको सबैभन्दा माथिल्लो भाग टुट्दा मात्रै घाँटी यसरी फनफनी घुम्छ ।
सर्भिकल क्वाइन भनिने स्पाइनल कर्डको सबैभन्दा माथिल्लो भाग झुण्ड्याइएको अवस्थामा मात्रै भाँचिने डाक्टर कायस्थको भनाई छ ।
महाकाली अञ्चल अस्पतालमा गरिएको पोष्टमार्टमको रिपोर्टमा भोकल कर्ड भाँचिएर निर्मलाको मृत्यु भएको उल्लेख छ । पोष्टमार्टममा उल्लेखित यो कुरा उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदनमा पनि छ । त्यो प्रतिवेदनमा सर्भिकल क्वाइन भाँचिएको कुनै तथ्य उल्लेख छैन ।
शवको घाँटी फनफनी घुमिरेहको अवस्थामा पनि महाकाली अञ्चल अस्पतालका चिकित्सकले स्पाइनल कर्ड वा सर्भिकल क्वाइन भाँचिएको भनेर पोष्टमार्टम रिपोर्टमा उल्लेख गरेका छैनन् ।
उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदन अनुसार पोष्टमार्टममा तीनजना डाक्टरहरूको संलग्नता रहेको थियो ।
निर्मला हत्याकाण्डपछि चर्केको आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीले निर्मलाको हत्या रोशनी बम र बबिता बम दिदीबहिनीको घरको आँगनमा रहेको अम्बाको रुखमा झुण्ड्याएर गरिएको दावी गरेका थिए ।
घटनाको दिन अर्थात् १० साउन २०७५ को एकसाता नबित्दै अम्बाको त्यो रुख काटिएको थियो । यसैबीच, बर्खास्तमा परेका परेका दिल्लीराज विष्टका छोरा किरण विष्ट र उनका साथी शिशिरसँग कुरा गरेको टेलिफोन वार्ता लिक भएको छ । किरणले निर्मला हत्याका बारेमा आफ्ना साथीलाई मिलाएर कुरा गर्न भनेका छन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कार्तिक २०, २०७५ समय: १०:०७:३९
सुत्केरीको अस्पतालमा मृत्यु भएपछि स्थिति तनावग्रस्त
तिब्र गतिको बस दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, तीन घाइते
कोरियाली भाषा परीक्षाको आवेदन दस्तुर अनलाइनबाटै बुझाउन सकिने , यसरी भर्न सकिन्छ कोरियाली भाषा परीक्षाको आवेदन (भिडियो)
आफ्नै श्रीमतीलाई धारिलो खुकुरी प्रहार गरी निर्मम हत्या गरे रामजीले
आइपिएल खेल्न दिल्ली पुगेका सन्दिपले दिल्लीमा समर्थकलाई नेपालीमै सम्बोधन गर्दै भने: जुन देशबाट खेले पनि नेपाली क्रिकेटलाइ मनमा लिएर हिडेको छु (भिडियोसहित)
चितुवा र कुकुर एकापसमा डेढ घण्टा भिडन्त : भिड्दा दुवैको मुत्युु
खैरो हेरोइनको लतमा फँस्दा १५ वर्ष जेल परेकी युवतीको जेल डायरी’थ्याङ्क गड, मलाई जेलमा पार्यौ !’
आजदेखि कोरियाली भाषा परीक्षाको आवेदन खुला , यसरी घरमै बसेर पनि आवेदन दिन सकिने
छोडीदिनुस भन्दापनि यौन पिपासुहरुले माहिलालाई लतार्दै जंगलमा लगेर यस्तो भिडियो बनाएर सामाजिक संजालमा भिडियो गर्दिए भाईरल (भिडियो )
भद्रगोल खेलेका जुम्ल्याहा दिदी बहिनीले शिशिर भण्डारी बिरुद्ध मुद्धा हाल्दै ? गीतबाटै यस्तो कुरा आयो (भिडियो हेर्नुस)
छि ! यस्तो पनि होली ,काठमाडौँमा यसरि मानियो होलि पर्व - हेर्नुहोस भिडियो
भारतीयले नेपालको बारेमा बनाएको यस्तो भिडियो जुन तपाईले हेरेपछि छक्क पर्नुहुनेछ,अवस्य हेर्नुहोला(भिडियो)
भाङ लागेपछि नाचेको नायिका शिल्पा सेट्टीको भिडियो सामाजिक संजालमा भाइरल(भिडियो )
जीवनभर बिहे नै नगरी बसेकी महिला, कारण थाहा पाउँदा पर्नुहुनेछ अचम्मित
अक्षय कुमार अभिनित फिल्म केशरीले गर्यो धमकेदार ब्यापार , पहिलो दिनमै गर्यो यति करोड
२ बर्षमै १० लाख सव्सक्राईभर्स पाएर शिशिर भण्डारीले नेपालको युटुबमा रेकर्ड तोडे (भिडियो हेर्नुस)
प्रधानमन्त्रीद्वारा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवलोकन
सुहाना थापा र अनमोल केसी अभिनित फिल्म ‘ए मेरो हजुर ३’को दोस्रो गीत सार्वजनिक (भिडियो)
राहात सामग्री बोकेर पुगे मिडियाकर्मी, मुसहर वस्तीमा खुशीको लहर देखियो (भिडियो)
सडक खन्ने क्रममा चाँदी र तामाका सिक्का फेला